Bright News - Page 75 of 81 - နောက်ဆုံးရသတင်းများ၊ဗဟုသုတများ၊နိုင်ငံတကာသတင်းများနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေပါသည်။
ရေချိုးပေးရုံဖြင့် ယားနာပျောက်သည့် ဆေးပင်
June 20, 2020 Software Kaber 0
ဆေးပင်ပေါ တဲ့သည့်ရာသီ ခု လို မိုး တွေ ရွာ လာ ပြီ ဆို ရင် မိ မိ တို့ ရဲ့ ပတ် ဝန်း ကျင် မှာ သည်လို အဖိုး တန် ဆေး ပင် ရ […]
ကြမ်းတမ်းနေတဲ့ လက်တစ်စုံကို နဂိုအတိုင်း ပြန်လည် နူးညံ့ အိစက် လာစေဖို့ အတွက် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မယ့် အိမ်တွင်းနည်းလမ်း ( ၅ )ခု
နေ့စဉ် နေ့တိုင်း လုပ်ဆောင် နေကြတဲ့ လုပ်ငန်း ဆောင်တာတွေမှာ လူတွေက လက်တစ်စုံကို မဖြစ် မ နေ အသုံးပြု ဖြစ်ကြ ပါတယ် ။ မကြာခဏ လက်ဆေး ခြင်း ၊ ပြင်းထန်တဲ့ ဓာတုဓာတ်ပစ္စည်းတွေ ၊ အစွန်းအထင်းတွေနဲ့ လည်း အမြဲလိုလို […]
June 19, 2020 Software Kaber 0
ပရိသတ်ကြီးရေ တေးသံရှင်ချယ်ရီသင်းရဲ့ HD ထွက်တယ်ဆိုတဲ့ ကောလဟာလတွေဟာ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေထက်မှာ ပျံ့နှံ့နေတဲ့အတွက် ချယ်ရီသင်းက ပရိသတ်တွေကို အဖြစ်မှန်ကိုရှင်းပြလာခဲ့ပါတယ် ။ သူမမှာ Tattoo မရှိကြောင်းနဲ့ အခုလက်ရှိ ယောကျာ်းလေး Group တွေ လိုက်ဖြန့်နေတဲ့ ချယ်ရီသင်းရဲ့ HD Videoဆိုတဲ့ထဲက ကောင်မလေးမှာ Tattoo ပါတယ်လို့ […]
“ဂျီဟောသူ”အတွက် ကိုယ်တိုင်လည်း ရင်ခုန်နေခဲ့တဲ့ မေမီကိုကို
ပရိသတကြှီးရေ မနေ့ ကဇှနလြ (၁၈)ရကနြေ့ ည (၇)နာရီအခွိနြ MRTV –4မှာ “ဂွီဟောသူ” ရုပသြံဇာတလြမြးတှဲကတော့ စတငပြှသခဲ့ပါတယြ။ ဒီဇာတလြမြးတှဲထဲမှာတော့ ပရိသတတြှရေဲ့ အခစွတြောတြှဖှဈေတဲ့ ဟိနြးထကြ၊ ရှငမြှလေ၊ မမေီကိုကို၊ဝိုငြးရှှရညေတြို့ အပှငြ တခှားသော ပရိသတတြှရေဲ့ အခစွတြောတြှလညြေး ပါဝငတြဲ့ ဇာတလြမြးတှဲလေးပဲဖှဈပါတယြ။ […]
လမ္းေတာင္မေလွ်ာက္ႏိူင္ေအာင္ နာေနတဲ့ ဒူးက်ီးေပါင္း အလြယ္တကူ ေပ်ာက္ခဲ့တဲ့နည္
” ကိုယ်တွေ့မို့ မျှဝေပါရစေ ” လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ လလောက်ထဲကလမ်းတောင်မလျှောက်နိူင်အောင် နာနေတဲ့ ဒူးကျီးပေါင်းတက်တာအထူးကုနဲ့ပြ/ဆေးမျိုးစုံသောက်/စက်တွေနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ် မပျောက်လို့စိတ်ညစ်နေတာ … သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ပြီးသူ့ကိုယ်တွေ့ဆိုပြီးညွန်းလို့ မယုံပေမဲ့စမ်းကြည့်လိုက်တာ တပတ်အတွင်းလုံးဝနီးပါးပျောက်သလောက်ဖြစ်သွားလို့ ပြန်လည်မျှဝေပါတယ် ။ မူရင်းတင်သူက သူငယ်ချင်း ကိုဇော်ဦးပါ ကိုယ်တွေ့မို့ စမ်းကြည့်စေချင်တယ် ။ သူငယ်ချင်း ကိုဇော်ဦး P […]
ဆီးခ်ိဳေသြးတိုး ရွိလွ်င္ .
ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ရောဂါ ပျောက်ဆေး။ လူလေး အမေရောဂါ ဆီးချို သွေးတိုး တို့ကို ဗမာတောကြက်ဥ ရှားဇောင်းလက်ပတ်တို့က လက်တွေ့ကျကျ သက်သာ ပျောက်ကင်းသွားပါပြီ။ ပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်က ၁။ ကြက်ဥနှစ်လုံး ၂။ ရှားဇောင်းလက်ပတ် တထွာလောက်။ ကြက်ဥ အနှစ်ကိုမသုံးရ အရည်ကြည်ကိုသာ သုံးရန်။ ရှားဇောင်းအနှစ်ကို ကြက်ဥအကာနဲ့ သံဂျီးရောင်ဖြစ်သည်အထိ […]
ယခု သတင်းကို ( Pyi Myanmar ) စာမျက်နှာ မှ တစ်ဆင့် ပြန်လည် မျှဝေ တင်ဆက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည် မလေးရှားရောက် မြန်မာ လုပ်သား တစ်ဦး အဆုံး စီရင်ပြန် ၊ အချိန် ၂ လ တာ ကာလ […]
မိုးတဖွဲဖွဲရွာတဲ့ မိုးကုတ်မိုးက ဘယ်လောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲ လက်တွေ့ပါပဲ… ဒီနေ့သေကြပြန်ပြီ စိတ်မကောင်းစရာပါ
စိတ်မကောင်းစရာဘဲ သေကြပြန်ပြီ…..မိုးကုတ်အနောက်ပိုင်း ကသည်းအုပ်စု ဘိုကုန်းရပ် (၁၉ . ၆ . ၂၀၂၀) တစ်နေ့ကပဲသတိပေးစာရေးပါသေးတယ် မိုးတဖွဲဖွဲရွာတဲ့မိုးကုတ်မိုး ဘယ်လောက်ကြောက်စရာ ကောင်းသလည်းဆိုတာ ကနေ့မနက် (၉) နာရီခန့်က အိမ်ဝင်းဖောင်ဒေးရှင်းတူးရင်း မြေပိလို့ သုံးယောက် သေပြန်ပြီ ။ နောက်ဆက်တွဲ ….တယောက်ဆေးရုံပို့နှစ်ယောက်က ဆက်ဖော်နေဆဲ ပါ… […]
ပုံမှန်တက်တူးတွေနဲ့မတူဘဲ စိတ်ကူးအသစ်အဆန်းများနဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့ တက်တူးများ ဓာတ်ပုံ (15 ) ပုံ
တတ်တူးထိုးခြင်းဟာ ယနေ့ခေတ်မှာတော့ ရေပန်းအစားဆုံး Body Paint အနုပညာအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ မိမိအကြိုက်ကိုယ်စီနဲ့ ပုံစံမျိုးစုံကို မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ ရေးခြယ်ချင်ကြပါတယ်။ တက်တူးပုံစံဒီဇိုင်းများကို အင်တာနက်ပေါ်မှာ ရှာလို့ရပေမယ့် များသောအားဖြင့် သာမန်ဒီဇိုင်းများသာ သင့်အနေနဲ့ မြင်တွေ့ရမှာပါ။ ဒါကြောင့် ပုံမှန်တက်တူးတွေနဲ့မတူဘဲ စိတ်ကူးအသစ်အဆန်းများနဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့ တက်တူးဓာတ်ပုံများကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ ၂။ ၃။ […]
နောက်တစ်ခါပြန်ရိုက်နိုင်ဖို့မလွယ်တဲ့ အံ့မခန်း အချိန်ကွက်တိရိုက်ချက်များ ဓါတ်ပုံ – ( ၂၀ ) ပုံ
ဓါတ်ပုံပညာဟာ လူအများစုရဲ့ စိတ်ဝင်စားကြတဲ့ ပညာရပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်၊အချို့သောဓါတ်ပုံပညာရှင်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ဓါတ်ပုံရိုက်ချက်တွေနဲ့ လူအများကိုပျော်ရွှင်မှုပေးနိုင်ကြသလို ဓါတ်ပုံဆရာရဲ့ အမြင် ရှုထောင့် နှင့် အချိန်အတိုင်းအတာစီမံခံ့ခွဲမှုတွေကို ပေါင်းစပ်လိုက်ချိန်မှာတော့ အလွန်အနုပညာမြောက်တဲ့ ဓါတ်ပုံတစ်ပုံထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ ယခုတင်ဆက်ပေးမဲ့ အကြောင်းအရာလေးကတော့ နောက်တစ်ခါပြန်ရိုက်နိုင်ဖို့မလွယ်တဲ့ အံ့မခန်း အချိန်ကွက်တိရိုက်ချက်များနဲ့ ကြည့်ရှုသူတွေကို အံ့သြမှင်သက်သွားစေနိုင်မဲ့ဓါတ်ပုံများပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ လမင်းကြီးကို ချိတ်ဆွဲထားတာ ၂။ […]